Ikhaya / Blog / Ukhethwe yi-NASA, Ezi zindlu zangasese zintathu ziya eNyangeni!
2020 / 11 / 01 uhleloBlog 2099 0
Ikhitshi kunye neBhati. Iintloko zekhitshi kunye neBhafu.
Nge-22 ka-Okthobha, i-NASA yabhengeza iziphumo zolu khuphiswano, nezakhokelela ekukhetheni "izindlu zangasese zenyanga" ezintathu, ngebhaso lokuqala leedola ezingama-20,000 XNUMX zisiya kulowo uphumeleleyo. Amabhaso ezinkozo anikezelwa kwamanye amangenelo amabini. Olunye ungeniso olwaphumeleleyo yayilelikaDeliffy, esenza ukuba iDeliffy ibe kuphela kwenkampani yegumbi lokuhlambela eliphumeleleyo.
丨 Umvuzo wokuqala 丨
Eyilwe ngoncedo lwabafundi beenkwenkwezi
Ibhaso lokuqala lokuphumelela kwindlu yangasese lenzelwe liqela loyilo lokuhlambela i-Translunar Hypercritical Repository 1 (THRONE), ekhokelwa yinjineli yaseWashington uBoone Davidson, kwaye uyilo lwendlu yangasese lwalusekwe kwiingcebiso zowayesakuba ngusomajukujuku owasetyhini uSusan Helms.
Ukuhlekisa ngeBhaso lokuQala lokuPhumelela
USusan Helms ngowayesakuba ngusomajukujuku weNASA owayesebenza komnye wee-shuttles eziye zayeka ukusebenza ngo-2011. Uxelele iqela loyilo lwendlu yangasese ukuba oosomajukujuku ababhinqileyo banexesha elinzima kakhulu ukusebenzisa indlu yangasese xa kuthelekiswa noosomajukujuku abangamadoda abanokusebenzisa nje ifanele ukufunxa uchame kude. Ngesi sizathu, i-THRONE iyile iToilet yangasese, esombulula ingxaki yoosomajukujuku ababhinqileyo abanobunzima bokusebenzisa indlu yangasese emajukujukwini ngokuyila ngokutsha isixhobo esimile okwefaneli ukuze ulunge ngcono umzimba wabasetyhini.
USusan Helms, owayesakuba ngumfazi weNASA Astronaut
Ukongeza, ngokungafaniyo nakwizindlu zangasese eziqhelekileyo ezisebenzisa impompo ye-vacuum, iqela le-THRONE lenze indlu yangasese ukuba isebenzise ifeni engenanto ukuthwala ilindle kwaye liyibeke kwingxowa ekhethekileyo yokuqokelela ukunciphisa unxibelelwano lwe-astronaut kunye nelindle.
丨 Ibhaso lesiBini Pr Ibhaso lesiBini 丨
Imicimbi ye-Fecal inokufakwa kwisikhenkcisi kwaye ibuyiselwe eMhlabeni
Ibhaso lesibini laya kwindlu yangasese eyonakeleyo eyenzelwe ngu-Thatcher Cardon no-Dave Morse. U-Thatcher Cardon ngu-Colonel Colonel wase-US kunye nogqirha wotyando owaphumelela i-HeroX Space Potty Challenge ngo-2017.
Le ndlu yangasese inezihlalo ezisisigxina zangasese kunye nomngxuma ogqobhoziweyo apho kufakwa khona ibhedi okanye intonga yococeko yokuzikhupha, kwaye xa kusenziwa into yokuchasa, ifeni encinci itsalela ilindle kwingxowa yokuqokelela, enokumiswa ngumkhenkce kwaye igcinwe de ibe ibuyiselwe eMhlabeni. Kuba le nkqubo yangasese ayinangqondo kakhulu, iyabunciphisa ubunzima benkqubo yokufika kwenyanga.
Ilindle lifakwa ngemibhobho kwingxowa yokuqokelela
丨 Ibhaso lesithathu
Ophumelele ibhaso lesithathu yiNdawo yangasese yendalo ngumyili weTriffy uFranziska Wülker. Indlu yangasese inesimo esime kakuhle kwaye kuthiwa ikulungele amadoda nabafazi. Kuba isikhululo sasemajukujukwini asinawo amandla omxhuzulane, indlu yangasese isebenzisa icentrifuge ekhethekileyo ukufunxa ilindle, ukuyicinezela kwaye emva koko uyigcine kwitanki ngesithuthi esime ngathi sijikelezayo. Indlu yangasese ikwanaso nesixhobo sokucoca ulwelo ukuqinisekisa ukuba amavumba kunye neebhaktheriya azivuzisi ngaphakathi kule ndlwana. Ngapha koko, inkqubo yokumpompa indlu yangasese iyazisebenza kwaye isebenza kwimeko yokuphela kombane, ukulungelelanisa imeko yesikhululo sendawo ngamaxesha kaxakeka.
Uyilo lweNdawo yangasese yangasese
Umyili Franziska Wülker
Indlu yangasese isebenzisa itekhnoloji yoqobo eyenziwe nguTrifi ukugcina ubunzima kunye nokusetyenziswa kwamandla kungaphantsi kwemigangatho ebekwe yiNASA. Kananjalo kuyilo, abaqulunqi basebenzise isoftware yoyilo kumzi mveliso weemoto, iarosface, njl.njl., Ezinokulinganisa imeko yokuhamba kwamanzi, kwaye yayisetyenziselwa uphuhliso lwetekhnoloji yeTrifi engenamida. UThomas Stammel, iGosa eliyiNtloko leTekhnoloji yeTrifi, uthe inkampani iyazingca ngokuba uFranziskaWülker wakwazi ukuyila indlu yangasese, nto leyo ebubungqina kubunkokheli bukaTrifi kubuchwephesha bezindlu zangasese.
Oosomajukujuku kwiNyanga ngo-2024 ngoMeyi bangasebenzisa izindlu zangasese ezitsha
Ngo-Okthobha kulo nyaka, i-NASA yazisa ngamalungiselelo amatsha enkqubo yenyanga "ka-Artemis", eyayicwangciselwe ukuthumela umfazi wokuqala kunye nendoda yesibini enyangeni ngo-2024. Isicwangciso esipheleleyo ngamanyathelo amathathu, kulindeleke ukuba sidle i-28 yeebhiliyoni zeerandi, eyi- $ 16 yezigidigidi kuphuhliso lwemodyuli yenyanga.
Olu lwazi luveze ukuba xa oosomajukujuku befika okokuqala enyangeni ngoDisemba ngo-1972, i-NASA ayibenzelanga indlu yangasese efanelekileyo, yiyo kuphela enokusetyenziswa ngelo xesha. Nangona kamva i-NASA yayila indlu yangasese ekhethekileyo yesikhululo sasemajukujukwini, kodwa oosomajukujuku kudala bengamadoda ikakhulu, kubandakanya isikhululo sasemkhathini, iziphekepheke, iisuti zasemajukujukwini, njl.njl. Nangona kunjalo, inani loosomajukujuku ababhinqileyo abavela kumazwe ahlukeneyo liyenyuka kule minyaka idlulileyo, kwaye iNASA ikwanenjongo yokuthumela oosomajukujuku ababhinqileyo enyangeni kwiminyaka emine. Ukuza kuthi ga ngoku, ukudibana koosomajukujuku abangamadoda nabasetyhini ngaphandle kwendlu yangasese yoMhlaba kufuneka kubekhona.
Oosomajukujuku baseJapan bagcina izindlu zangasese endaweni
Oosomajukujuku baseMelika bafunda izindlu zangasese zasemajukujukwini.
Ngapha koko, izindlu zangasese zasesithuba sele zisetyenziswa kwizikhululo zasemajukujukwini zamazwe aphesheya, kodwa ezi mveliso zenzelwe kuphela i-microgravity kuphela, ke ukuphuhliswa kwezindlu zangasese ezisetyenziswa enyangeni kwaba yinto engenakuphepheka. Kungenxa yale meko yangasemva ukuba iNASA Space Toilet Contest yazalwa, kwaye sikholelwa ukuba oosomajukujuku kungekudala bazokwazi ukusebenzisa ezi zindlu zangasese ziphumelelayo.
Ngaphambili :: Ngaba uyazi ukuba ungalihombisa njani igumbi lokuhlambela elithandwayo eSunken ngo-2020? next: Ingxelo ye-2020 yaseMelika yokuHamba kweGumbi lokuhlambela: Izindlu zangasese eziSmart, ii-Faucets zeSensor, kunye neKhabinethi yoKuhlambela yangasese iya kuduma!